Indlu esemaphandleni eLake Shetek - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni eLake Shetek
Le ndlu inemigangatho emibini inomtsalane ikwiLake Shetek entle. Phumla, uphumle uze wonwabele nyhani ubomi basechibini. Kuza kufuneka uzenzele iinkumbulo ezingapheliyo kule ndawo yokuphola engasechibini.
UKUHLALA PHANDLE: Ukubuka ichibi, iveranda engasemva, umngxuma womlilo, umphezulu wangaphambili onegrili yegesi, ingca eninzi yokudlala imidlalo yeyadi, ii-kayaks ezimbini, isikhephe sokutyibiliza emanzini, idokhi (esetyenziswa nangabanye abantu), ilifti yesikhephe efumanekayo. Ungalibali ukupakisha iipali zakho zokuloba!
UKUHLALA NGAPHAKATHI: Ikhitshi elinefenitshala epheleleyo (isitovu, ifriji, i-microwave, imbiza yekofu, izitya, iimbiza/iipani, iziqholo, njl.) Igumbi lokuhlala linemigangatho eyenziwe ngamaplanga, indawo yokubasa umlilo, i-TV, I-WIFI, i-intanethi, imidlalo yebhodi/amakhadi. I-Sunroom inendawo yokuhlala kwiveranda enembonakalo entle yechibi, indawo yokutyela eyongezelelekileyo. Onke amagumbi okulala amathathu akwigumbi eliphezulu, kukho izinto zebhedi. Indlu yangasese enendawo yokuhlambela enye, ikota yegumbi lokuhlambela elikwigumbi elingaphantsi (sisenza iiprojekthi kweli gumbi lokuhlambela, kodwa ke, isasebenza kakhulu). Iitawuli zokuhlamba ziyafumaneka. (Nceda uphathe iitawuli zakho zaselwandle.) Umatshini wokuhlamba/wokomisa impahla ngesepha yokuhlamba impahla ekwigumbi elingaphantsi. Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kwigumbi lokuhlala nakwigumbi lokulala elikhulu.
INDAWO YOKUPAKA: KUKHO iindawo eziyi-3 phambi kwendlu esemaphandleni. Zininzi izinto ezifumanekayo xa ziceliwe.
Le ndlu isemaphandleni ifumaneka lula ngaphandle kwendlela enamavili. Iindawo ezikufutshane ezinobungane. Ukuloba kakhulu. Ukubuka ichibi elihle nendawo epholileyo.
Uza kuba wedwa. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha siza kusebenzisa idokhi (intsapho yethu ine-pontoon kunye nesikhephe esiqalwe apho). Sihlala kule ndawo ngoko sifowunele (NANINI NA) ukuba uyasidinga!